Lufthansa Group inodzorera mari yakakweretwa kuhurumende yeGermany
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Airlines » Lufthansa Group inodzorera mari yakakweretwa kuhurumende yeGermany
Airlines • nhandare yendege • avhiyesheni • Kuputsa Nhau dzeEurope • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Germany Kuputsa Nhau • Hurumende Nhau • nhau • vanhu • Kuvakazve • Kutarisirwa • ushanyi • kutakura • Kufamba Wire Nhau
Lufthansa Group inodzorera mari yakakweretwa kuhurumende yeGermany.
Mangwanani ano, Silent Participation II yeEconomic Stabilization Fund yeFederal Republic of Germany (ESF) inosvika bhiriyoni imwe yemaeuro yakabhadharwa zvizere.
Zvese zvikwereti zveGerman uye Silent Participations, kusanganisira mubereko, zvave kubhadharwa zvakateerana.
Pasi pemamiriro ezvinhu aya, ESF yatanga kutengesa chikamu chayo muDeutsche Lufthansa AG chinosvika kuapprox. 14 muzana yemari yekugovana panosvika Gumiguru 2023 munguva pfupi yapfuura.
Package yehurumende yeGermany yakatanga kupa zviyero uye zvikwereti zvinosvika mabhiriyoni mapfumbamwe emadhora, iyo kambani yakadonhedza pasi inosvika mabhiriyoni mazana matatu nemazana masere emadhora.
NeChishanu, Deutsche Lufthansa AG yakadzora kana kudzima mari yese yasara yehurumende Kudzikamisa kubva kuFederal Republic of Germany. Kubhadhara kwacho kwakaitwa kare kupfuura zvazvanga zvarongwa. Izvi zvakaitwa zvakanyanya nekukwira kuri kudiwa kwekufamba nendege, kukurumidza kugadziridzwa uye shanduko yeLufthansa Group uye misika mikuru yekuvimba nekambani.
Izvi zvinoreva kuti mangwanani ano, Silent Participation II yeEconomic Stabilization Fund yeFederal Republic of Germany (ESF) inosvika bhiriyoni imwe yemaeuro yakabhadharwa zvizere. Mushure mekunge kambani yatobhadhara Silent Participation I muna Gumiguru, iyo chete 1 bhiriyoni euros yakadhirowewa, iyo isina kushandiswa uye yakasara chikamu chatomiswa zvakare. Kukadzi wapfuura, kambani yakanga yatobhadhara chikwereti cheKfW che1.5 bhiriyoni euros zvisati zvatarisirwa. Izvi zvinoreva kuti zvikwereti zvese zveGerman uye Silent Participations, kusanganisira mubereko, zvave kubhadharwa zvakateerana. Pasi pemamiriro ezvinhu aya, ESF yakaita kutengesa danda rayo mukati Deutsche Lufthansa AG kusvika kune approx. 14 muzana yemari yekugovana panosvika Gumiguru 2023 munguva pfupi yapfuura.
Carsten Spohr, CEO weDeutsche Lufthansa AG, anoti:
Ndakamiririra vashandi vese veLufthansa, ndinoda kutenda hurumende yeGermany nevateresi vekuGermany. Mune dambudziko rezvemari rakaipisisa munhoroondo yekambani yedu, vakatipa maonero emangwana. Izvi zvaita kuti tikwanise kuchengetedza mabasa anodarika zviuru zana. Isu tinodada kuti takakwanisa kuchengeta vimbiso yedu kare kupfuura zvaitarisirwa uye kubhadhara rubatsiro rwemari yeGermany. Ndinoda kutenda vashandi vedu nekuzvipira kwavo kukuru uye kunyanya vatengi vedu vakaramba vakavimbika kwatiri munguva dzino dzakaoma. Lufthansa yakakwanisa kuvimba neGermany uye Germany inogona kuvimba nayo Lufthansa. Zvinetso zvakawanda zvichiripo. Chishuvo chedu ndechekusimbisa chinzvimbo chedu pakati pemapoka makuru endege pasi rose. Kuti izvi zviitike, isu ticharamba tichienderera mberi nekugadziridza uye shanduko yekambani.
Remco Steenbergen, CFO we Deutsche Lufthansa AG, inoti:
“Pamusoro pazvo, ndinoda kutenda vanoisa mari neruvimbo rwavo nekambani yedu. Pasina ivo kubuda nekukurumidza kubva kuSilent Participations kungadai kusina kuitika. Kuvimbika uku chisungo chekuti isu tirambe tichienderera mberi munzira yatakatora yekugadzira patsva nekushandura Boka. Isu takatsunga kuenderera mberi nekusimbisa bheji redu, kuwedzera purofiti yedu uye kuburitsa inoyevedza capital inodzoka. Zvinangwa zvedu zvemari zvakaburitswa muna Chikumi zvinoratidza izvi zvakajeka. Tine chokwadi chekuti tichagadzira kukosha kwakasimba kune vagovani vedu. "
Muna June 2020, vagoveri ve Deutsche Lufthansa AG yakachenesa nzira yeKudzikamisa matanho eEconomic Stabilization Fund (ESF) yeFederal Republic of Germany. Package yehurumende yeGermany yakatanga kupa zviyero uye zvikwereti zvinosvika mabhiriyoni mapfumbamwe emadhora, iyo kambani yakadonhedza pasi inosvika mabhiriyoni mazana matatu nemazana masere emadhora. Izvi zvinosanganisira anenge 9 miriyoni euros iyo ESF yakavamba nayo masheya muDeutsche Lufthansa AG.
Kugadzirisa zvikwereti zviripo uye hurumende Kudzikamisa mapakeji, kambani yakatora zvikwereti zvakasiyana-siyana uye equity mari matanho kubva mumatsutso 2020. Mukuita izvi, yakabatsirwa nekutenda kuri kuramba kuchikura kwemisika yezvemari mune ramangwana remangwana. Lufthansa Boka.
MunaNovember 2020, kambani yakaita "kudzoka" pamisika mikuru ine bond inoshandurwa ine huwandu hwe600 miriyoni euros uye bond yekambani ye1 bhiriyoni euros. Muna Kukadzi 2021, Deutsche Lufthansa AG zvakare yakabudirira kuburitsa bond yemabhiriyoni 1.6 emaeuro. Kumwe kuiswa kwebhondi kwakateverwa muna Chikunguru 2021 muhuwandu hwebhiriyoni imwe yemaeuro. Muna Gumiguru 1, kambani yakabudirira kupedza kuwedzera kwemari. Mari yakazara kubva mukuwedzera kwemari yakasvika 2021 bhiriyoni euros. Pakupedzisira, musi wa2.2 Mbudzi 9, iyo Lufthansa Boka yakabudirira zvakare kushanda pamusika wezvemari uye yakapa bond muhuwandu hwe1.5 bhiriyoni euros.